किन सेवन गर्ने त्रिफलाचुर्ण ? यस्ता छन् सेवन गर्नुको आश्चर्यजनक लाभहरु ! – MediaNP
त्रिफलाको शाब्दिक अर्थ तीन फलको मिश्रण हो । उक्त तीन फल मानवस्वस्थ्यको लागी अमृतीय गुणले भरिएको छ । तीन फलमा अमला, हर्रो र बहेडा पर्दछन् । यी तीनको बीजलाई निकालेर समान मात्रामा धुलो मिलाउदा त्रिफला चुर्ण तयार हुन्छ । यी सामग्रीलाई आफैले घरमा बनाएर सेवन गर्दा निकै फाइदा हुन्छ । दैनिक त्रिफला चुर्णलाई सहि समयमा सेवन गर्ने हो भने मुटुरोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, नेत्ररोग, पेटको विकार पदार्थ र मोटोपनाको समस्याले सताउँदैन् । त्यस्तै कुष्ठरोग, अस्थमा, दात, कपालको लागी पनि यो निकै गुणकारी रहेको छ, यदि तातो पानीमा एक चम्चा उक्त चुर्णलाई मिलाएर राती सुत्ने समयमा यसको सेवन गरेमा कब्जियतको समस्या समधान भएर जान्छ । विभिन्न अध्ययनबाट त्रिफला चुर्ण एक लाभदायिक सिद्ध भएको छ । त्रिफलाचुर्णको सेवनले यस्ता हुन्छन्, फाइदाहरुः
१. आँखाको रोग
करिब एक चम्चा त्रिफला चुर्णलाई रातभरी एक गिलास पानीमा भिजाएर बिहान उक्त पानीलाई कपडाले छानेर आँखा धुनाले आँखा पोल्ने, चिलाउने लगायतका समस्या समधान हुन्छ । दैनिक रुपमा त्रिफलमा भिजाइएको पानीले खाना धुनाले आँखामा कुनै पनि किसिमको रोग लाग्ने सम्भावना रहदैन् ।
रातको समयमा त्रिफलता चुर्णलाई पानीमा भिजाएर बिहान त्यसलाई पेष्टको रुपमा ब्रस गर्नाले मुखको दुगन्र्ध हटेर जान्छ । यसले दात वा गिजालाई पनि मजबुद बनाउने काम गर्दछ ।
३. मोटोपना कम गर्ने ।
मन्द रुपमा पानीमा उमालेर क्रिफलताचुर्ण र थोरै मह मिलाएर सेवन गर्नाले मोटपना कम हुन्छ ।
४. पिसाब सम्बन्धी समस्या ।
पिसाब सम्बन्धीत सम्पूर्ण विकार वा मधुमेह भएकाले रातको समयमा पानीमा त्रिफला उमालेर मनतातो भएपछि सेवन गर्नाले कब्जियतको समस्या समधान हुन्छ ।
त्रिफला चुणको सेवन दैनिक भोजनमापछि २ देखि ४ ग्राम चुर्ण दुईचोटी मनतातो पानीको साथमा सेवन गर्नु राम्रो मानिन्छ ।तर गर्भवर्ती भएका महिला वा कुनै रोगले सताएको भने यसको सेवन गर्नुहुदैन् । दैनिक दुधको सेवन गर्नेले यसको सेवन दुई घण्टाको अन्तरमा मात्र गर्नुपर्दछ ।
डाइटिङ्को दौरानमा कतिबेला के खाने ? यसरी बनाउनुहोस् डाइट चार्ट !